Inona no ho hita ao Haro, renivohitry ny divay eran-tany | News Travel
Louis Martinez | 24/04/2022 20:30 | Tanànan'ny Espana, mpitarika
Raha mikasa ny handeha any La Rioja, hanontany tena ianao inona no hita ao haro satria izy no iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao amin'ny faritany. fantatra amin'ny hoe renivohitry ny divay, zara raha misy mponina iraika ambin’ny folo arivo, nefa manana vakoka manankarena sy sakafo matsiro. Raha ny marina dia nambara ny tanànany taloha Toerana kanto manan-tantara mg 1975.
Amin'ny maha te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao fa io no tanàna voalohany tany Espaina nanana jiro ho an'ny daholobe ary, isan-taona, dia mankalaza ny Ady divay, fetiben'ny tombotsoan'ny fizahantany nasionaly izay ahitana mpandray anjara an'arivony ao anaty zava-pisotro mahazatra ao an-tanàna. Saingy, tsy misy fisalasalana, dia hasehonay anao izay rehetra hitanao any Haro.
1 Lapan'ny tanàna Haro
2 Lova ara-pivavahana, zavatra ilaina hojerena ao Haro
3 Tilikambo Moyen Âge, vavahadin'i Santa Bárbara ary tetezana Briñas
4 Palacios, tsy nampoizina mahafinaritra hita ao Haro
7 Gastronomie sy fety any Haro
Lapan'ny tanàna Haro
Haro Town Hall, ao amin'ny Plaza de la Paz
Izy io dia tranobe neoclassical tsara tarehy tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay namolavola ny architect Ventura Rodriguez, mpanoratra ny fanorenana toy ny Lapan'i Liria in Madrid na ny tranon'ny Filipiana Augustinianina ao Valladolid. Na izany aza, ny akanjon'ny tanàna, izay manarona ny fasade, dia amin'ny fomba Baroque.
Ity, vita amin'ny vato masonry, dia misy rihana roa. Ny ambany dia manana andohalambo semicircular, ary ny ambony dia misy lavarangana mitohy. Ny famantaranandro misy tilikambo lakolosy sy soratra fahatsiarovana ny fanorenana azy dia mameno ny lafiny anoloana amin’ilay trano.
Ny Lapan'ny tanàna dia ao amin'ny Kianjan'ny fandriampahalemana, ny mahazatra indrindra amin'ny Haro. Ao anatin'izany dia afaka mahita ny vavahady st bernard, Sisan'ny manda tranainy sy ny zava-tsarobidy Lapan'i Bendana. Ity dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ao amin'ny fomba Plateresque, na dia manana galeria Mudejar tsara tarehy tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza izy io, izay heverina ho miavaka amin'ny La Rioja rehetra.
Lova ara-pivavahana, zavatra ilaina hojerena ao Haro
Fiangonan'i Santo Tomás, iray amin'ireo tsangambato ara-pivavahana hojerena ao Haro
Ny tanànan'i Rioja koa dia miavaka amin'ny lova ara-pivavahana mahatalanjona. Misongadina ao anatin’izany ny Fiangonana paroasin'i Santo Tomás Apóstol, dia nanambara fa tsangambato ara-javakanto manan-tantara tamin'ny 1931. Aza hadino ny mankasitraka ny fasade Plateresque, ny asan'ny Philip Bigarny. Ny sisa amin'ny tempoly dia manambatra ny fomba Gothic sy Renaissance, na dia Baroque aza ny taova sy ny alitara lehibe.
Manoro hevitra anao koa izahay hitsidika ny Basilica de Our Lady of Vega, any amin'ny sisin'ny tanàna ary koa ny fomba baroque. Iray amin’ireo trano fivavahana tsara tarehy indrindra ao Haro izy io. Ny saron'ny andohalambo semicircular dia misongadina amin'ny pilastera mifatotra izay mialokaloka ny sarin'i San Pedro, San Pablo ary ny Immaculate ary miafara amin'ny lakolosy.
Ho an'ny atiny, dia hahita drafitra gorodona misy naves telo voarakotra amin'ny vaults groin tohanana amin'ny pilasters cruciforme sy andohalambo semicircular ianao. Misy fizarana dimy izy io ary miafara amin'ny loha ambany kokoa noho ny sisa amin'ny tempoly izay satro-boninahitra amin'ny fanilo sy vault semicircular. Jereo koa ny alitara lehibe, nataon'i Santiago del Amo tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX, izay misy sary sokitra polychrome ny Virjinin'ny Vega tamin'ny XIV.
Tokony ho hitanao koa ny trano fivarotan'i San Agustín, navadika ho hotely ary manarakaraka izay ny Teatra Breton an'ny Blacksmiths, ary ny Hermitage of San Felices de Bilibio, any amin'ny efatra kilometatra miala ary mipetraka eo amin'ny akorandriaka haro, amin'ny toerana nofinofy.
Tilikambo Moyen Âge, vavahadin'i Santa Bárbara ary tetezana Briñas
Ny voalohany dia ao amin'ny tanàna taloha, akaikin'ny vavahadin'i San Bernardo, izay efa nolazainay taminao. Izy io dia tilikambo tamin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo, izay naverina tamin'ny laoniny taona vitsivitsy lasa izay. Amin'izao fotoana izao, ny atitany dia mametraka ny fizarana zavakanto ankehitriny amin'ny Museum an'i La Rioja.
Ho an'ny ampahany, manoro hevitra anao ihany koa izahay mba hahita varavarana iray hafa izay sisa tavela amin'ny rindrina taloha tamin'ny Moyen Âge. dia momba ny ny an'i Santa Bárbara na Garrás, nohavaozina vao haingana ihany koa. Tena akaiky an'io ny varavaran'i Santo Tomás, izay tsy misy intsony.
Mbola mahavariana kokoa ny brinas tetezana, izay miampita ny reniranon'i Ebro. Fanorenana gôtika izy io ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX ny tapany tranainy indrindra. Naorina tamin'ny vato masonry, manana maso fito izy io ary nisy fiarovana tany am-boalohany, izay noravana tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX.
Palacios, tsy nampoizina mahafinaritra hita ao Haro
Lapan'ny Count of Haro
Ny iray amin'ireo tsy ampoizina lehibe nomanin'i Haro ho anao dia ny habetsahan'ny lapany. Efa nolazainay taminao ny momba an'i Bendaña, saingy manoro hevitra anao ihany koa izahay mba hijery ilay mahavariana trano lapan'ny Salazar, naorina tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny vato masonry. Misy rihana telo izy io ary misongadina ny tohatra ao anatiny, misy tady vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny rindrina ary misy jiron'ny lanitra.
Manoro hevitra anao koa izahay hitsidika ny Lapan'ny Count of Haro, koa tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy tamin'ny fomba Renaissance, na dia misy haingo baroque aza. Etsy andaniny ny lapa tafo dia vatosoa rococo ary ny Ny Bezara misy foibe ara-kolontsaina. Farany, tandremo tsara ny mijery ny Lapan'ny Constables, rava amin'izao fotoana izao ary indrindra ny an'ny ny hazo fijaliana, tranobe baroque tsara tarehy tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay misy akanjo manaitra ny endriny.
Riscos de Bilibio, iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary hita any Haro
Ny tanànan'i Rioja dia manolotra faritra maitso maro ho anao na any amin'ny tanànany na amin'ny manodidina azy. Mikasika ity farany dia efa voalazanay tamin’ny fandalovana ny tanin’i San Felices. Ao amin'ny antsoina hoe Bilibio crags, faritra misy ala izay ahitanao fomba fijery manaitra ny Ebro sy ireo tanàna akaikin'i Haro.
Ho azy ireo, Zaridainan'ny Virjinin'ny Vega manodidina ny basilika izay efa voalazantsika. Ary ny Vista Alegre Park manararaotra ny lalamby taloha amin'ny zotra Haro-Ezcaray ary mifarana amin'ny Moor's Fountain Park. Izy ireo koa dia manolotra anao faritra tsara handehanana sy hankafizana ny natiora ao amin'ny valan-javaboary Felix Rodriguez de la Fuente, izay misy poplar fotsy enina voasokajy ho hazo tokana an'i La Rioja, an'ny Iturrimurri y ny deck, izay manana farihy artifisialy mihitsy aza.
Na izany aza, raha tianao, dia afaka manao zotra manaraka ny lalana GR-99, iray amin'ireo antsoina hoe Ebro trails. Tambajotra lavitr'ezaka mamakivaky ny tanànan'i Haro izy io. Na koa manao fanatanjahantena amin'ny complexe ny foara, izay manana dobo filomanosana ho an'ny daholobe sy fitaovana hafa.
Efa nolazainay taminao ny fampirantiana zavakanto ankehitriny hita ao amin'ny tilikambo Moyen Âge. Ary koa, ao amin'ny Basilica de la Vega dia manana tranombakoka ianao. Fa ho hitanao fa mahaliana kokoa, indrindra raha liana amin'ny tontolon'ny oenology ianao, ny Foiben'ny Interpretation divay Rioja. Ao anatin'izany no hahitanao ny tsiambaratelon'ny fambolena voaloboka sy ny famokarana divay manaraka. Ary afaka mankafy tsiro voalamina sy hetsika hafa koa ianao.
Tsy io ihany no toerana ahafahanao mitsambikina ny kolontsaina divay. Ao Haro dia misy maro wineries Manolotra fitetezam-paritra sy tsiron-tsakafo koa izy ireo. Anisan'izany ny Bodegas Bilbaínas, izay ao amin'ny zaridainany, ankoatra izany, dia afaka mahita hazo sequoia telo manaitra ianao. Amin'ny lafiny iray, ao Viña Tondonia ianao dia manana trano heva namboarin'ilay mpanao mari-trano malaza Anglo-Iraky. zaha Hadid.
Gastronomie sy fety any Haro
Ovy Fomban'ny Riojana
Raha tsy milaza aminao momba ny gastronomy mahery vaika sy ny fetin'i Haro izahay, dia tsy ho tanteraka ny fitsidihanay ny tanànan'i Rioja. Mikasika ity farany dia efa voatanisa ny Ady divay, nefa mety ny miresaka momba azy io lalindalina kokoa, satria io no anisan’ny fety lehibe indrindra ao amin’ilay faritra.
Ankalazaina ny marainan’ny 29 jona eo anivon’ny fety ho fanomezam-boninahitra an’i Jehovah San Pedro. Eo amin’ny hantsan’ny Bilibio no misy azy io ary niainga avy amin’ny fivahiniana masina natao teny an-toerana isan-taona. Raha ny mahazatra, dia nisy firavoravoana niforona nandritra ny sakafo, izay niafara tamin'ny fisotroana divay ny mpihinana.
Raha ny momba ny gastronomie an'i Haro, dia mahery toy ny matsiro. Anisan'ny vokatra mahazatra azy, ny legioma avy amin'ny zaridainany, ny zanak'ondry avy amin'ny saha ary, mazava ho azy, ny divay. Miaraka amin'izany dia atao koa ny zurracapote, zava-pisotro mampifangaro azy amin'ny voankazo ary alaina amin'ny Paska miaraka amin'ny donuts.
Amin'ny lafiny iray, tena mahazatra lovia hena fako, izay natao tamin'ny viscera zanak'ondry, mahia, saosisy mitovitovy amin'ny pudding mainty, saingy vita amin'ny tsinain'ny zanak'ondry ihany koa ary mifanandrify amin'izany ganagana. Io biby io ihany no ampiasaina amin'ny fanatsaràna, anisan'izany ny tetehina amin'ny tifitra voaloboka.
Tsy misy tsy ampy ny latabatr'i Haro ovy Fomban'ny Riojana, ny caparrones na tsaramaso natsatsika na ny laoka legioma. dia lany koa tsaramaso fotsy misy papelika, salady tongolo y andilany misy sakay, ankoatry ny sakafo maro hafa.
Ho famaranana, nasehonay anao ny tsara indrindra Inona no hojerena ao Haro ary koa ny zavatra maro azonao atao amin'ity tanàna ao La Rioja ity. Saingy, ankoatra izany, afaka mitsidika tanàna manodidina ianao. Ohatra, akaiky dia manana ny tanàna tsara tarehy ianao Briones, San Millan de la Cogolla, miaraka amin'ireo monasiterany izay nieritreritra ny nahaterahan'ny fiteny Castilian na Santo Domingo de la Calzada, miaraka amin'ny katedraly manaitra azy. Tsy drafitra tena mahasarika ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Inona no hojerena ao Haro